apuro inovhara makumi matatu emamwe zvitoro zveapuro zvinosanganisira zvese nzvimbo muFlorida
Kuru Nhau & Ongororo Apple inovhara makumi matatu emamwe maApple Stores eU.S. kusanganisira nzvimbo dzese muFlorida
Apple inovhara makumi matatu emamwe maApple Stores eU.S. kusanganisira nzvimbo dzese muFlorida
Sezvo huwandu hwezviitiko zvecoronavirus zvinotaurwa zuva nezuva mumatunhu akati wandei zvichitanga kupfura kumusoro, Apple iri kutanga kuvhara zvimwe zvacho zveApple Stores. Vhiki rapfuura rapfuura, takakuudza izvozvo Apple yaive kudzima mwenje kwechinguva munzvimbo gumi nenena dzekuwedzera muFlorida . Takatumira icho chinyorwa musi waJune 25 uye mazuva maviri gare gare nyika yakarova nhamba yepamusoro ye9,585 mitsva mitsva yakaziviswa.
Dzimwe nyika dziri kurova bhatani rekumbomira pakuvhurazve zvirongwa uye nhasi Apple yati zvimwe zvitoro makumi matatu zvezvidhinha nedhaka muU.S. zvichavharwa. Zvinoenderana ne data kubva CNBC , 77 Apple Stores dzakadzikama pamasvondo mashoma apfuura. Nemasara maFlorida maviri-akavakirwa Apple Stores kudzima mwenje nekuvhara magonhi nhasi, zvese zvemuApple Stores muSunshine State izvozvi zvadzorwa.
Kunze kwezvitoro muFlorida, nzvimbo dziri padyo neLos Angeles dzakavharwawo. NeChitatu, kambani yakati Apple Stores muFlorida, Mississippi, Texas, neUtah zvakavharwa nekukasira. Zvitoro mune mamwe matunhu akaita seAlabama, California, Georgia, Idaho, Louisiana, Nevada, uye Oklahoma zvichavhara neChina. Kusvika mangwana, 77 kana 28% ye271 US Apple Stores munyika haizove yakavhurwa. Mutauriri weApple anoti, 'Nekuda kwezvazvino COVID-19 mamiriro mune dzimwe nharaunda dzatinoshandira, tiri kuvhara zvitoro munzvimbo dzino. Tinotora danho iri nekungwarira kwakawanda patinoongorora mamiriro acho ezvinhu uye tinotarisira kudzosa zvikwata zvedu nevatengi nekukurumidza sezvazvinogona. '
Overseas Apple Stores senge iyi muBrussels inoramba yakavhurika
Apple iri kutora matanho kunyangwe muzvitoro zvinoramba zviri pachena. Kune zvimwe zvitoro, bhizinesi rese riri kuitiswa curbside apo kune dzimwe nzvimbo vatengi vanofanirwa kuita musangano wekupinda mukati. Kuzvitoro zvekupedzisira, kana vatengi vachisvika kuti vaiswe vachatariswa tembiricha yavo uye vanomanikidzwa kupfeka chifukidzo; kutenderera munharaunda kunoitwa sezvo mutengi wega wega achifanira kupatsanurwa nemamita matanhatu.
Zvitoro zveApple zvakavharwa nhasi zvinosanganisira St. Johns Town Center, University Town Center muFlorida; Renaissance kuColony Park muMississippi; Barton Creek, Domain Northside, La Cantera, North Star, Knox Street, Northpark Center, Galleria Dallas, Ciello Vista Mall, Southlake Town Square, University Park Village muTexas.
Iwo maApple Stores ayo achavhara China anosanganisira Iyo Summit muAlabama; Glendale Galleria, Northridge, Pasadena, The Grove, Third St. Promenade, Century City, Manhattan Village, Beverly Center, Sherman Oaks, Topanga, Los Cerritos, The Americana kuBrand, Valencia Town Center, Victoria Gardens, The Oaks, Musangano muCalifornia; Cumberland Mall, Perimeter, Lenox Square, Avalon, Mall yeGeorgia muJojiya; Boise Towne Square mukatiIdaho; Baton Rouge, Lakeside Shopping Center muLouisiana; Mufashoni Ratidza, Iyo Foramu Zvitoro, Town Square, Summerlin muNevada; Penn Square, Woodland Hills mukatiOklahoma.
Saka mutengi angatarisira chii paanoshanyira Apple Store muU.S. iyo yakavhurwa uye ichiramba yakadaro? Apple inotsanangura kuti 'Usati wapinda muApple Chitoro, isu tinotora tembiricha yako uchishandisa thermometer isingabate ganda kuti ive nechokwadi chekuti inoyera pazasi pe37.5 ° C (99.5 ° F). Hapana dhata kubva kuiyi nzira inonyorwa. Usati washanyira chitoro chako, ndapota zvibvunze mibvunzo inotevera ine chekuita nezvehutano: Ini parizvino ndine fivha, kutonhora, mhasuru kana kurwadziwa nemuviri here? Ini parizvino ndine chikosoro here kana kuti ndiri kusangana nenyaya dzekufema? Ndine musoro unorwadza, huro, kubuda mhino, kana kuzara? Ndiri kusangana nekusvotwa, kurutsa, kana kuita manyoka here? Ini ndanga ndichisangana nechero fungidziro kana dzakasimbiswa kesi dze COVID-19 mumazuva gumi apfuura. Kana iwe ukapindura Hungu kune chero cheizvi ndapota shanyira kune rimwe zuva rinotevera. Unogona kuwana zvese zvakafanana zvigadzirwa uye masevhisi kubva kuchitoro chedu chepamhepo pasina mahara-kuendesa dhirivhari, uye mumwe-on-one rubatsiro rwekutenga kubva kuna Nyanzvi kuburikidza neChat, kana nekufonera 1‑800 ‑ YANGU ‑ APPLE. Tenga Apple Store online. '
Kumhiri kwemakungwa uko iyo coronavirus isn & apos; isingadzoke, Apple inokwanisa kuchengeta zvitoro zvayo zvakavhurika munyika zhinji.
ipad mini cyber Muvhuro 2019
Tora Mahara LG MiniBeam Projector uye B&O BEOPLAY H3 headset kana iwe ukatenga LG G6 kana V20
T-Mobile ine Samsung & apos; s 5G-inogoneswa Galaxy Tab S7 uye Tab S7 + iri kutengeswa pamutengo wakanaka
Software Kuvandudza Maitiro
Maitiro ekudzima autoplay mavhidhiyo pa Instagram (iOS uye Android)
Maitiro ekumisikidza uye kumisikidza eSIM neVerizon chirongwa pane mbiri-SIM iPhone XR, XS kana Max